Ka shaqeynta birta - Mestech Industrial Limited
Qalabka birta (shaqada birta), waa nooc ka mid ah farsamada farsamaynta iyo wax soo saarka ee samaynta maqaallada, qaybaha iyo qaybaha ka samaysan qalabka biraha.
Qaybaha birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa mashiinno iyo qalab kala duwan. Qaybaha birtu waxay leeyihiin xasilloonida cabbirka, xoogga iyo adkaanta, dabeecadaha iska caabbinta heerkulka sare iyo hooseeya iyo waxqabadka, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo in lagu sameeyo qaybo sax ah Marka la barbardhigo qaybaha balaastigga ah, waxaa jira noocyo badan oo qalab ah oo loogu talagalay qaybaha birta, sida aluminium aluminium, daawaha naxaasta ah, zinc alloy, steel, titanium alloy, magnesium alloy, iwm, oo leh sifooyin kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah, ferroalloy, alloy aluminium, alloy copper iyo zinc alloy ayaa inta badan loo isticmaalaa wax soo saarka warshadaha iyo madaniga ah. Qalabkaan birta ah waxay leeyihiin sifooyin jireed iyo kiimiko oo kala duwan, qaabdhismeed kala duwan iyo qaabka tiknoolajiyada lagu farsameeyo qeybaha birtu waxay leedahay farqi weyn.
Hababka ugu waawayn ee lagu farsameeyo qaybaha biraha ayaa kala ah: makiinadda, shaabbadda, shubka saxda ah, metallurgy budada, wax taaj oo kale oo lagu duro birta.
Mashiinku waa habka lagu beddelayo cabirka guud ama waxqabadka shaqada iyada oo loo marayo nooc ka mid ah qalabka farsamada. Marka loo eego farqiga u dhexeeya hababka farsamaynta, waxaa loo qaybin karaa jarista iyo ka shaqaynta cadaadiska. Shaabbadeeddu waa nooc ka mid ah qaab sameynta habka loo adeegsado oo u adeegsata saxaafadda una dhinta xoog xoog leh oo dibadda ah oo ku yaal xaashida, xargaha, tuubada iyo astaanta si loo soo saaro cillad caag ah ama kala soocid, si loo helo qaabka loo baahan yahay iyo cabirka shaqada (qaybta shaabbadda).
Sax shubay, metallurgy budada iyo wax taaj oo kale duray biraha iska leh geedi socodka shaqada kulul. Waxay ku samaysan yihiin daloolka caaryada iyagoo kuleyliya biraha la shubay heerkulka sare si ay u helaan qaabka iyo cabirka loo baahan yahay. Waxa kale oo jira makiinado gaar ah, sida: laser machining, EDM, ultrasonic machining, electrochemical machining, walxaha mashiinka beam iyo mashiinka xawaaraha sare leh. Wareejinta, shiidida, abuurista, ridaya, shiidi, mashiinada CNC, makiinada CNC. Dhammaantood waxay ka tirsan yihiin farsameynta.
Qalabka mashiinka ee lagu farsameeyo birta
Qalabaynta mashiinka - lathe Center
Qalabaynta dheecaan koronto -EDM
Sax machining fur
Mashiinka ridaya dhinta
Dhimashada dhimashadu dhimato
Muujinta qaybaha biraha:
1. Qaybaha birta ee birta ah: qaybo ka sameysan bir, chromium, manganese iyo waxyaabaha ay ku darsamaan.
Qaybo caaryada sax
Qaybaha birta ee mashiinka CNC
Qaybaha gudbinta qalabka
2. Qaybaha biraha aan xawliga lahayn: Alloysyada aan caadiga ahayn ee aan caadiga ahayn waxaa ka mid ah aluminium, macdanta naxaasta ah, magnesium alloy, alloy nickel, daawaha daasadda, tantalum alloy, titanium alloy, zinc alloy, molybdenum alloy, zirconium alloy, iwm.
Daboolka aluminium ee aluminium
Aluminium guryaha alwaaxda u dhinta
Daaweynta dusha sare waxaa loo qaybin karaa afar dhinac
1. Daaweynta dusha sare ee farsamada: ciideynta, toogashada qaraxa, sifaynta, duubista, nadiifinta, cadayashada, ku buufinta, rinjiyeynta, saliida, iwm.
2. Daaweynta dusha kiimikada: bluing and blackening, phosphating, pickling, electroless plating of metal of all and alloys, daaweynta TD, QPQ daaweynta, qayilo kiimikada, iwm.
3. Daaweynta dusha sare ee korantada: oksaydhka anodic, nadiifinta elektaroolka, koronto siinta, iwm.
4. Daaweynta dusha sare ee casriga ah: CVD uumiga uumiga kiimikada, uumiga jirka uumiga PVD, rakibaada ion, dahaadhka ion, daaweynta dusha sare ee laser, iwm.
Mestech waxay macaamiisha siisaa adeegyo nashqadeyn iyo soo saarid ah oo loogu talagalay qeybaha birta oo ay ka mid yihiin birta, aluminium ka sameysan, zinc alloy, alloy copper iyo titanium alloy. Fadlan nala soo xiriir haddii loo baahdo.